XOG: Lixda Kooxood Ee Aan Illaa Hadda Guul-darro Arag, Dalalka Ay Ka Ciyaaraan Iyo Xogta Kulamadii Ay Yeesheen | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
XOG: Lixda Kooxood Ee Aan Illaa Hadda Guul-darro Arag, Dalalka Ay Ka Ciyaaraan Iyo Xogta Kulamadii Ay Yeesheen
(15-11-2018) Lix kooxood oo ayaa illaa hadda ku naaloonaya farxad iyo inay ku jiraan xilligii ugu wanaagsanaa oo aan hal mar laga badinin, dhamaan shanta horyaal ee waaweyna iyaga oo kaliya ayaa ah naadiyada aan hal mar laga badinin.
Saddexda horyaal ee France, Germany iyo Italy waxa mid walba ka jirta hal koox oo aan illaa hadda laga badinin, laakiin waddanka Ingiriiska ayaa ah kan ugu wanaagsan ee kooxaha ugu badan ay guul-darro la’aan yihiin, waana saddex kooxood oo 12 kulan oo Premier League ah oo ay ciyaareen aan dhadhaminin qadhaadhka guul-darrada.
Horyaalka dalka Spain ee LaLiga oo lagu dhalleeceeyo mid aan si aad ah loogu tartamin oo kooxo tiro yar amaba laba kooxood oo kali ahi ay ku xafiiltamaan, ayaa dhamaan kooxaha ay mid walba la kulantay guul-darro. Barcelona waxa la garaacay laba jeer, Real Madrid afar kulan ayaa laga badiyey iyo Atletico Madrid oo hal ciyaar la kulantay jab.
Haddaba, waxa aanu warbixintan idiinku soo gudbinaynaa lixda kooxood ee aan illaa hadda laga badinin, waxaanad ka hubisaa inay ku jirto kooxda aad taageerto, amaba midda ay xafiiltamaan naadigaaga, si gaar ahna u qiimee kulamada ay badiyeen, kuwa ay barbarreeyeen iyo dhibcaha ay heleen:
Juventus waxay raadinaysaa inay horyaalka Serie A ku guuleysato markii siddeedaad oo xidhiidh ah, waxaana 12 kulan oo xili ciyaareedkan ay yeelatay ay guuleysatay 11 kulan, hal ciyaarna barbar-dhac ayay gashay. Kooxda ugu soo xigta ee la loollamaysa waa Napoli oo ka hoosaysa lix dhibcood, lana kulantay laba guul-darro, waxaase ay u muuqataa in aanay cidina soo qaban doonin, sababtuna waxay tahay inay si weyn isku xoojisay xagaagan oo uu kusoo biiray Cristiano Ronaldo oo 15 ciyaarood oo uu u saftay u dhaliyey sagaal gool, taas oo ka dhigtay ciyaartoyga ugu goolasha badan Talyaaniga.
Horyaalka Talyaaniga oo kaliya maaha, laakiin tartanka UEFA Champions League ayay Juventus tahay kooxaha ugu horreeya ee loo saadaalinayo, waxaana afar kulan oo ay ciyaartay ay badisay saddex ka mid ah, halka kulankii ugu dambeeyey ay Manchester United si lama filaan ah uga badisay.
PSG (Ligue 1, France)
Mishiinka ay wareejiyaan Cavani, Neymar iyo Mbappe oo dhaliyey goolashii ugu badnaa, waxay kooxda PSG ka dhigeen naadiga aan illaa hadda laga adkaanin horyaalka dalka Faransiiska ee Ligue 1.
13 ciyaarood oo horyaalka ah oo ay yeesheen, dhamaantood way guuleysteen, waxaanay haystaan 39 dhibcood oo saafi ah, waana kooxda kaliya ee shanta horyaal ka haysata dhamaan dhibcihii suurtogalka ahaa ee ay heli lahayd, laakiin waxay dhibaato ka haysataa UEFA Champions League oo afar ciyaarood ay ka keentay hal guul oo kaliya.
Arrin kale oo murugo leh ayaa haysata PSG, waana inay jabisay sharciga dhaqaale wanaagga ee FIFA oo loosoo gaabiyo FFF, warar sir ah oo la helayna waxay sheegayaan inay halis ugu jirto in laga saaro tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan iyo ganaax kale oo ciqaab looga dhigi doono.
Borussia Dortmund (Bundesliga, Germany)
Bayern Munich ayaa lixdii jeer ee ugu dambaysay horyaalka Bunddesliga ku guuleysatay, laakiin xili ciyaareedkan waxay la kulmeen guul-darrooyin xidhiidh ah, waxaanay ku jirtaa kaalinta shanaad.
Borussia Dortmund weli lagama adkaanin xili ciyaareedkan horyaalka Bundesliga, 11 kulan oo ay ciyaareenna waxay guuleysteen 8 ka mid ah, halka saddexda soo hadhayna ay barbar-dhac galeen. Laacibka Marco Reus ee afka hore uga ciyaara Dortmund ayaa hoggaaminaya gool-dhalinta, waxaana uu illaa hadda shabaqa taabsiiyey 11 gool, laakiin da’yarka reer England ee Jordan Sancho ayaa qaab-ciyaareed wanaagsan ku daba-taagnaa oo si weyn u caawiyey kooxda.
Manchester City, Liverpool & Chelsea (Premier League, England)
Saddexda kooxood ee Manchester City, Liverpool iyo Chelsea wali lamay kulmin wax guul-darro ah, dhamaan 12-kii ciyaarood ee ay yeesheenna waxay ku dhamaysteen guulo iyo kulamo tiro yar oo ay barbar-dhac galeen.
Man City: Kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League, waxay ku jirtaa halgan u muuqda inay dhib la’aan ugu gaadhi karayso yoolkeeda xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ahna ku guuleysan doonto. 10 ciyaarood oo guulo ah iyo laba barbar-dhaca ah ayay ka diiwaangashatay kulamadii 12-ka ahaa ee xili ciyaareedkan.
Wiilasha tababare Guardiola waxay dhaliyeen goolashii ugu badnaa, celcelis ahaana kulan kasta waxay shabaqa taabsiiyeen min saddex gool, waxaase laga dhaliyey shan gool oo kaliya. Sergio Aguero ayaa dhaliyey goolasha ugu badan, waxaanu taabsiiyey shabaqa siddeed gool, halka Raheem Sterling uu ku jiro kaalinta labaad oo uu lix gool dhaliyey.
Liverpool: Liverpool waxay ku naaloonaysaa bilowgii ugu wanaagsanaa horyaalka Premier League, 12 ciyaarood oo ay yeelatayna waxay guuleysteen sagaal kulan, iyo saddex barbaro ah, waxaanay fadhiyaan kaalinta labaad oo ay ka horreyso Man City oo farqigoodu yahay laba dhibcood oo kaliya.
Weeraryahanka reer Masar ee Mohamed Salah iyo Sadio Mane oo Senegal ah ayaa min lix gool u dhaliyey, waxaase wacdaro dhigay goolhayaha dunida ugu qaalisan ee Alisson Becker oo laga dhaliyey shan gool oo kaliya 12-kii ciyaaarood ee horyaalka Premier League.
Chelsea: Kooxda saddexaad ee horyaalka Premier League aan laga badinin iyo kooxda lixaad ee liiska naadiyada guul-darro la’aanta ah ee shanta horyaal ee waaweyn. 12 ciyaarood oo Blues ay yeelatay waxay badisay 8 jeer, afarta kalena barbar-dhac ayay gashay, waxaanay laba dhibcood ka hoosaysaa Liverpool oo kaalinta labaad ee kala sarraynta tartanka ku jirta haysatana 28 dhibcood iyo Man City oo ay ka ka hoosayso 4 dhibcood, hoggaankana ku haysa 30.
Eden Hazard ayaa ah gool-dhaliyaha Chelsea iyo horyaalka Premier League oo shabaqa taabtay toddoba jeer, waxaase horyaalka u dheer in aan hal mar laga badinin tartanka Europa League afartii ciyaarood ee ay yeesheen.